परिवर्तनको ऋण के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
der स्वीकृति क्रेडिट नाम अन्तर्गत छ छुट क्रेडिट धेरैद्वारा चिनिन्छ। यो ऋण एक छोटो अवधिको ऋण हो जुन बैंकले उधारकर्ताबाट एक बिल कि कि पछि मितिमा पूर्ण हुन्छ।
ऋण के साथ परिवर्तन के छ?
एक वैकल्पिक ऋणलाई व्यापार परिवर्तन पनि भनिन्छ, जुन विनिमयको माध्यमबाट सुरक्षित हुन्छ। क्रेडिटको यो फाराम प्रयोग गरिन्छ जब सामानहरू प्राप्त गर्न वा सामानहरूको खरिद प्राप्त गर्न आवश्यक छ। परिवर्तन ऋण मुख्य रूपमा व्यावसायिक स्तरमा प्रयोग गरिन्छ। यस प्रकार को ऋण सामान र सेवा को वित्त मा प्रयोग गरिन्छ। सिद्धान्तमा, ग्राहकहरूलाई पैसामा तुरुन्तै प्राप्त हुने वस्तुहरू वा सेवाहरूको भुक्तान गर्न वा भुक्तानी मितिको साथ ऋण सुचारु गर्ने अवसर दिइएको छ।
बिल एक्सचेंजको साथ क्रेडिटसँग ऋणदाताको बराबर
यदि सप्लायरले ग्राहकलाई भुक्तानी लक्ष्यको साथमा विनिमय क्रेडिटको रूपमा प्रदान गर्दछ भने, त्यसपछि उसले उधारकर्ताको भूमिकालाई ग्रहण गर्छ। एकपटक विनिमय ऋणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दा। विशेष गरी, परिवर्तनको विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रहरूमा धेरै लोकप्रिय थियो। तथापि, आज, कर्जाहरू कहिल्यै पक्कै पनि तुरुन्तै छन्, किनकि तिनीहरू धेरै गाह्रो हुन्छन् र प्रशोधन गर्न महँगो हुन्छन्। परिवर्तनको आधारमा एक प्रमाणपत्रको रूपमा छ। प्रमाणपत्रलाई विनिमय बिलको प्रावधानहरू अनुसार ड्राफ्ट गरिनु पर्छ र मान्य हुनुपर्छ। विनिमयको बिलहरू सधैं निजीकृत हुन्छन् र यसैले लाभार्थीको नाममा जारी गरिन्छ। यदि अर्को लाभार्थी दर्ता हुनु हो भने, उनको नाम प्रमाणपत्रको पछाडि रेकर्ड गरिएको हुनुपर्छ। स्वैप ऋण क्रेडिट र भुक्तानी को एक संयोजन हो।
एक विनिमय ऋणमा निम्न डेटा हुनु पर्दछ।
- लाभार्थीको नाम
- मुद्दाको मिति
- प्रदर्शनी स्थान
- नाम "परिवर्तन" कागजातमा हुनुपर्दछ
- भुक्तानी स्थान
- उधारकर्ताको नाम र हस्ताक्षर
- बिलको मूल्यको बारेमा पैसा आदेश
- मितिको मिति
यस्तो ऋणको विशेषता भनेको मुद्दा मुद्दा मिति मितिबाट विचलित हुन्छ। यसरी, लाभार्थीले उधारकर्तालाई ऋण प्रदान गर्दछ। विनिमयको बिलको भुक्तानीलाई तुलनात्मक रूपमा सख्त छ। यसको परिपक्वताको दिन, उधारकर्ताले विनिमयको बिलको रकम पेश गर्नुपर्दछ। यदि परिवर्तन ऋण पूरा हुँदैन भने, यो सामान्यतया अदालतमा दण्डित गरिनेछ।
आजको बंधक क्रडिट कसरी प्रयोग गर्दछ?
इन्टरचेक ऋणहरू प्राय आपूर्तिकर्ता चलानीहरूको लागि भुक्तान गर्न प्रयोग गरिन्थ्यो। यस क्षेत्रमा व्यापार परिवर्तन अब प्रयोगमा प्रयोग गरिन्छ। एक व्यापक भूमिका अहिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायमा व्यापार क्रेडिटसँग जोडिएको छ। तथापि, एक व्यापार ऋण अन्य ऋण जस्तै कम्प्यूटरीकृत वा मेशिन हुन सक्दैन। यस कारणको लागि, यो विशेष गरी बैंकहरूको लागि महँगो छ। व्यापारीहरूको लागि, यस्तो ऋण निश्चित रूपमा केही फाइदाहरू छन्। उदाहरणको लागि, व्यापारीले 90 दिनको लागि व्यापार परिवर्तनको साथ आफ्नो आपूर्तिकर्ताहरू मध्ये एक मुद्दा जारी गर्न सक्छ। यदि आपूर्तिकर्ताले तेस्रो पक्षमा खुला इनभ्वाइस तिर्नु पर्ने छ भने, त्यो बिलको विनिमयमा यसलाई दर्ता गरेर बिलमा नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस तरिकाले यो पुष्टि भएको छ कि त्यो सहमति भएको मिति मा उनको दावी छ। यसकारण ऋण भुक्तान मिति को एक राम्रो हेज हो।
निकट भविष्यमा परिवर्तनको साथमा ऋण:
- बैंकिङ र व्यापारीहरूको बीचमा सामान्य
- इन्टरभाइज लोनको गहन समय र कर्मको खर्च चाहिन्छ
- खरिदकर्ता निश्चित भुक्तानी अवधि सेट गर्न अनुमति दिन्छ
- भुक्तानीको अवधि सुरक्षित गर्न सेवा गर्दछ
- गैर भुक्तानीको लागि अभियुक्त गरिनेछ
अघिल्लो लेखराम्रो आचरण अवधि
अर्को लेखपरिवर्तनीय बन्धन